Ogaden News Agency (ONA) – – Badda Jawle een la joojin karayn – dhaantadii Cabdi iley ugu jeclaa oo qofkii dhagaysanaya la soo xidhayo
– Badda Jawle een la joojin karayn – dhaantadii Cabdi iley ugu jeclaa oo qofkii dhagaysanaya la soo xidhayo
Posted by ONA Admin	/ January 29, 2012
Jahawareer midkii ugu waynaa ee maamul gumaysi u wakiil ah soo mara ayaa ka muuqda Jigjiga taasoo muujinaysa inuu fashilmay barnaamijyadii gumaysiga uu ugu talagalay inuu halganka shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ku soo afjaro.
Marka dawlad hadaladeeda iyo hab dhaqankeeda uu is-buriyo, oo qofna qofka kale uu aamini waayo oo midwalba uu hooskiisa ka dido, oo caruurtiisa iyo reerkiisa uu aamni waayo, oo qofwalba uu ugu muuqdo cadaw ka soo horjeeda, oo xabsiyada ay buux-dhaafiyaan dadkii shacabka ahaa ee la noolaa, oo hantidii loogu talagalay dalka boob iyo qaataye qaado loogu dhaqaaqo, oo qofwalba oo masuul ka ah xafiis uu aamino in muddo yar un uu jagada haysan doono, sidaa darteedna uu hamigiisa 1aad noqdo intuu xafiiska joogo inuu ka xoolaysto, dawladaasi waa mid ku jirta xilli kala guur ah oo isula joogta un yaan la ogaanin ceebta meesha taala.
Dhiigyacab Meles arintaa ayaa ka haysata, gaar ahaan maamulka uu dhigtay Jigjiga ee Cabdi iley uga masuulka ahaa laynta shacabka taasoo natiijo dhalin weyday.
Maalin walba waxyaabo kaa qosliya ayaad ka maqli Jigjiga. Waxyaabaha aan isqaadan karin ee Cabdi iley uu doonayo inuu is-qabadsiiyo waxaa ka mid ah; meel wuxuu doonayaa inuu bixiyo sawir ah inaysan jirin ONLF oy u dhamaatay, isla mar ahaantaa waxaa maalinwalba xabsiyada loo taaxaabaa boqolaal shacab ah oo da’walba leh rag iyo dumarba oo lagu soo eedeynayo waxaad tihiin taageerayaal JWXO. Waxaa ka mid ah majaajilada ka socota maalinwalba golayaashiisa in inta wiil dhalinyara ah la soo taago mel fagara ah la leeyahay waxaan soo qabanay sargaal sare oo ONLF oo inta la soo horjoojiyo dad caloola waaweyn oo kuraas ku fadhiya laga sheegsiinayo hadalo la wada xafidsan yahay hadda.
Waxyaabaha qosolka leh ee maalmaham ay qorayeen shabakadaha waxaa ka mid ah in dad kor u dhaafaya 20 loo soo xidh-xidhay hees caan ka ahayd waayadanba maamulka gumaysiga. Heestan oo dhaanta ahaan loo qaado – Bada Jawle een la joojin karayn – ayaa Cabdi iley oo muddo la dhacsanaa TV-giisa Cakaarana ka qaadi jiray loogu macneeyay Jawle waxaa laga wadaa JWXO. Waxaa la sheegay inuu isagoo madax haysta yidhi soo wada qabta kooxdii tumi jirtay iyo kuwii alifay iyo odayaashii isku dayay inay u sharxaan in si khaldan wax loogu sheegay.
Hadda dhantaadaa iyo muusiqadeeda ayaa noqotay dambi qofkii lagu maqlo xabsiga loo taxaabayo, oo daaqadaha loo soo istaagaa dadkii ku jaadi jiray, waxaana laga mamnuucay idaacadda iyo Tv-ga Cakaaro in dhaanto sidaa oo kale loo tumo laga soo saaro.
Xabsiga 15ka sano ah ee lagu xukumay dhiigyacabkii Jeel Ogaden, Cabdi badi ayaa iyada qudheeda ay garan la’yihiin dadka la shaqaysta gumaystaha sababta ka dambaysa. Mana dhici karto in la yidhaahdo Cabdi iley ayaa u xidhay ina bade dhibaatadii uu ku hayay dadka shacabka ah oy isla ogaayeen dilkooda, balse uu Cabdi iley ahaa midka u keensada dadka si loogu ciqaabo ama dilo.
Ilo wareedyo kale ayaa sheegay in arintan lagu dajinayo dhaliilaha faraha badan ee xukuumadda dhiigyacab Meles loo soo jeediyay eek u saabsan xasuuqa ka socda Ogadenya, arintan ayaa soo saarideeda siraha ku duugan waxaa ku hawlan dad xog ogaal u ah arimaha maamulka adis ababa. Waxaa kaloo la sheegayaa inay jiraan warbixino laga qoray gobolka oo muujinaya inay lagama maarmaan tahay hadii la doonayo Cabdi iley inuu sii joogo xafiiska in la qurxiyo wajigiisa oo loo muujiyo inuu yahay nin u taagan danaha qabiilkiisa si loo soo xiragaliyo. Hasa ahaatee dad badan oo lala tashaday ayaa u arka inuusan Cabdi iley ahayn shaqsi la qurxin karo, sababtoo ah ma ah shaqsi leh caqli iyo aqoon ku filan oo ka soo bixi kara marxaladda uu doonayo gumaysiga Itobiya inuu uga gudbo marxaladii hore ee fashilantay.
Warbixino badan oo naga soo gaadhay Jigjiga ayaanan soo wada dhigi karin asbaabo istraatiiji ah oo la xidhiidha halganka socda darteed, waxaase hubaal oo qof walba u muuqata in xasilooni dari iyo kala shaki iyo kala yaac uu ka dhex socdo maamulka gumaysiga ag-oolka.